HomeEnglandRyan Giggs Oo Sheegay Inaanu Seexan Habeenkii xallay ahaa oo dhan —- Tolow maxaa saamaleelka keenay
Ryan Giggs ayay ka soo booday neef weyni , sheegayna inaanu hurdo seexanin habeenkii Jimcihii iyo habeenadii ka horeeyeyna hurdo yari ay dishay tan iyo markii loo magacaabay tababaraha kumeel gaadh ka ah ee Manchester United, laakiin aakhirkii ku nuux nuuxsaday in hurdo la’aantiisii dhashay guusha ay ka gaadheen Norwich ee 4-0 ta ah.
Wayne Rooney iyo Juan Mata ayuu midkiiba laba gool ka hor dhaliyey taageerayaashii xamaasadaysnaa ee garoonka Old Trafford soo buux dhaafiyey, goolashaas oo u horseeday United guushii ugu weynayd ee ay garoonkooda ku gaadhaan xili ciyaareedkani.
Isla markaana Giggs, oo dhinac isaga leexiyey wararka sheegaya in jagada kumeel gaadhnimada loogu bedelayo tababare buuxa , ayaa ku adkaystay inay ku dheertahay oo uu sugi kari la’yahay ciyaarta xigta kulankii caawa ee ay guulaysteen.
Isagoo la hadlaya ciyaarta kadib warfidiyaha Sky Sports, wuxuu yidhi: ‘Waan ku raaxaysanayaa, waad ogtahay 4-0 waxay noo ahayd riyo Rumowday dhamaantayo, Waxaan aad uga mab suuday qaab ciyaareedkii.
Mar uu ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey sidii uu ku qanciyey ciyaaryahanada siduu u kala xulanayay, Giggs wuxuu ku jawaabay: ‘Indho iskuma keenin oo ma seexan xallay oo dhan arintaas darteed.
‘Ciyaaryahanada qaarkood oo aan xataa garoonka gallayn, Inaad ka reebto sida Juan Mata oo ka saarto kooxda koowaad (XI) waxay ahayd mid adag.
‘Waxaan ahay tababare kumeel gaadh ah laakiin waxaan sidoo kale ahay ciyaaryahan kamid ah iyaga marka waa xaalad culus.
‘Mid mid baan ugu sheegay dhamaantood ka hor ciyaarta, qaar kamid ah ayaa ka cadhooday laakiin hadana aqbalay.
‘Waxa na soo maray todobaad qiiro leh. So dhawayntii garoonka ee taageerayashu waxay ahayd mid qaali ah. Mudo dheer ayaan ka soo baxayay tuumbada soo gasha garoonka ee qolalka gudaha ka soo baxda , laakiin tani waxay ahayd midii uugu fiicnayd.Talaabadaa iga luntay’